Thwebula DirectX 12 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: DirectX
IDirectX software iphakethe eklanyelwe ngokukhethekile ukuba ngcono computer ukusebenza emkhakheni okunokubonwayo kanye nokuzwiwayo. Abashayeli iDirectX izosebenzisa lo wanamuhla kunazo ihluzo emakhadi the ephakeme kakhulu ukusebenza kahle, ngokuvumela noma iyiphi imisebenzi soxhumanoningi liyophelela the nqampuna umhlabeleli. Okokuqala, lesi sici kubalulekile iDirectX imidlalo. Imidlalo eminingi edinga ngesikhatsi ukufakwa by abasebenzisi presetter iDirectX. Njengamanje emakethe inguqulo ye iDirectX, lokhu kungaba ukuhlinzeka ukusebenza ngcono kanye nokwesekwa cutting-onqenqemeni ubuchwepheshe. Ikakhulu, i-game kungenzeka isethwe umthunzi no ukuthungwa, efana tessellation. Ngakho-ke izithombe in 3D kuyoba okungenzeka futhi ugxile imininingwane emincane.
Ukuthuthukisa izinga wabashayeli
Ukuthuthukisa of graphic
Amazwana ku DirectX
DirectX software ehlobene
Isofthiwe ukuqapha isimo computer. Futhi isofthiwe iqukethe amathuluzi ukulawula kanye ulungise kwemigomo izingxenye computer.
I-CrystalDiskInfo – isofthiwe ukubheka isimo kanye nezinga le-drive ye-hard drive. Isoftware ikhombisa imininingwane eningiliziwe mayelana nezinkomba ezahlukahlukene zobuchwepheshe bamadiski.
Lesi siphequluli has a iqoqo amathuluzi ubuke ekuphepheni ubumfihlo umsebenzisi ngesikhathi Ukushweza web.
I-DivXLand Media Subtitler – isoftware yakhelwe ukudala, ukuhlela nokwengeza imibhalo engezansi kufayela levidiyo. Uhlelo lokusebenza lisekela amafomethi amaningi wemibhalo engezansi futhi likuvumela ukuthi ukhiphe ukusakazwa komsindo.
Ithuluzi ukuvimba ukuxhumana inethiwekhi kusukela eziyingozi IP-amakheli amaseva. Isofthiwe kwenza ukwakha bese uhlela blacklists IP-amakheli ukwephulwa ezithile futhi ayanda izinsongo ezahlukene.